Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Pelican Products ho azon'ny Platinum Equity
Platinum Equity dia nanambara androany ny fanaovan-tsonia fifanarahana marimaritra iraisana hahazoana ny Pelican Products, mpitarika manerantany amin'ny famolavolana sy ny fananganana tranga fiarovana avo lenta ary fitaovana goavambe ho an'ny matihanina sy ireo mpankafy ivelany, ary vahaolana amin'ny famatsiana mifehy ny mari-pana ho an'ny sehatry ny fahasalamana.
Tsy nambara ny fe-potoana ara-bola. Ny fifanakalozana dia antenaina ho vita amin'ny faran'ny telovolana faha-2021.
Ny pelikan dia miasa amin'ny sehatra roa voalohany: ny Pelican Products dia mamolavola sy manamboatra tranga fiarovana avo lenta, rafitra fanaovan-jiro lavitra, ary vokatra ho an'ny mpanjifa any ivelany ho an'ny tsenan'ny governemanta, varotra ary mpanjifa tena mahazaka. Peli BioThermal dia manome portfolio feno vahaolana parifera mifehy ny mari-pana ho an'ny fisedrana klinika mitombo avo lenta sy ny tsena biopharma ara-barotra.
"Nandritra ny 45 taona mahery, Pelican dia nanangana marika matanjaka manana laza malaza eo amin'ireo mpanjifa mitaky sy tsy mivadika amin'ny fanaovana ny sasany amin'ireo vokatra tsy mety simba indrindra eto an-tany," hoy ny mpiara-miasa amin'i Platinum Equity, Jacob Kotzubei. "Vonona izahay amin'ny fananganana ny lova manankarena amin'ny orinasa ary hampiasa vola amin'ny fanavaozana mitohy."
Ny foiben-toerany any Torrance, CA, Pelican dia mitazona tranokala fanamboarana 12, ivon-toerana serivisy 17 sy tobim-pifandraisana ary birao iraisam-pirenena mivarotra 23 manerana ny firenena 25.
"Miaraka amin'ny dian-tongotra manerantany sy ny tambajotram-fanaparitahana midadasika, Pelican dia sehatra miavaka amin'ny fitomboana azo ary manana fotoana lehibe amin'ny tsena ifotony sy ny sokajy mifanila aminy," hoy ny talen'ny fitantanana Platinum Equity, Matthew Louie. "Manantena ny hiara-hiasa amin'ny ekipa mpitantana ny orinasa izahay ary hamoaka ny loharanon-karena sy ny M&A ho fanohanana ny dingana manaraka amin'ny fitomboana sy ny fanitarana an'i Pelikana."
Ny CEO CEO Pelican Phil Gyori dia hanohy hitarika ny orinasa aorian'ny fifanakalozana.
"Rehefa mandroso miaraka amin'ny fanohanan'ny Platinum Equity isika, matoky aho fa hitohy ho matanjaka ny làlam-pivoarana Pelican, ary hitombo ny vokatra sy ny serivisinay hamaly ny filan'ny mpanjifa marobe," hoy Andriamatoa Gyori. “Manantena ny hampiakatra ny tanantsika izahay, hiara-miasa amin'ny ekipa efa za-draharaha an'i Platinum, ary hamorona toko vaovao mahafinaritra amin'ny tantara Pelikana.”
Gibson Dunn & Crutcher LLP dia manome mpanolotsaina ara-dalàna ary Willkie Farr & Gallagher LLP dia manome torohevitra momba ny famatsiam-bola amin'ny Platinum Equity amin'ny fahazoana Pelikana. BofA Securities no mpanoratra voalohany amin'ny famatsiam-bola.
Credit Suisse dia mpanolotsaina manokana momba ny vola ary Latham & Watkins LLP dia mpanolotsaina ara-dalàna an'ny Pelican Products.